Ihe mgbagwoju anya ihe omimi Cómo Aprovechar Ihe Nleta anya nke ọma na SEO
Ọ bụrụ na ị na-achọ ahịa ahịa ma ọ bụ na-eme ka ndị ahịa na-echekwa ihe ọ bụla na-eme, ma ọ bụrụ na ị na-echekwa ihe ọ bụla, ị ga-achọpụta na PB & J. Estas dos na-eme ihe ndị a na-ekwu. Dị ka ihe atụ na-akwado gị, ọ ga-eme ka ị na-aga ahịa.
Frank Abagnale, nke ndị ahịa nke Shiol , a na-emekarị ka ọ bụrụ na ị na-eme ka a na-eme ka ọ dị mkpa, na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ na -
Nke a na-eme ka ndị njem na-ekwu: ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-emepụta ihe dị iche iche na-enyere gị aka ịkọwapụta ya. Los expertos en SEO inteligentes na-achọpụta na ọ bụghị ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ka a na-eme ka ọ bụrụ na a na-eme ihe ọ bụla. Los SEO ma ọ bụ ndị ọkachamara na-ezigara ha ozi ọma na frases nke dị iche iche nke ọ bụla dị iche iche ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ọ bụla na-eme ka ha na-arụ ọrụ. Esto belata drásticamente la competencia y el tráfico por lo tanto, haciéndolos más fáciles de clasificar para.
Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị a, ị ga-eme ka ndị mmadụ na-eme mgbanwe nke ahịa na potenciales y en ventas. Mgbe ọ bụla ị na-echekwa ihe ọ bụla ị chọrọ, gbanwee ihe ndị dị iche iche na-emekarị ka ọ dị mma.
Obtención de las etiquetas de datulo y meta nkọwa correctas
Nke a bụ ihe ndị ọzọ na-emepụta: bụ nkọwa ndị na-adịghị na-eme ka ha na-emekọ ihe ọnụ, na-eme ka ọ bụrụ na ha na-arụ ọrụ. A gran titulo y explicación aumentan na cantidad de buscadores "pụtara" na ịdebanye aha na ha, ọtụtụ ndị dị ka ndabere. Nke a na-eme ka ị na-edeba aha na ntinye.
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ị ga-eme, ị nwere ike ịchọta ozi dị ka nke a na-ahụ anya site na ị na-ederede. Una explicación nke na-egosi na ọ bụrụ na ị nwere ike ịkọwapụta ihe ọ bụla na peeji nke, ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla, ị nwere ike ịbanye na ha na peeji nke. Nke a na-emekarị, na-eme ka ndị nleta dị mkpa ma ọ bụrụ na ị maara ihe dị na peeji nke ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla dị na ya,
Nke a na-eme ka ndị njem na-ekwu: ụgbọala nke ụgbọala na-eme ka ọ bụrụ na ị na-echefu ya. Nke a na-eme ka ọ bụrụ na anyị na-eme ka anyị na-akọwa ihe dị iche iche na-eme ka ndị ọzọ na-agụnye ihe ndị ọzọ. Ị nwere ike ịbanye na nkeji edemede.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ka onye ọ bụla nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị na-ele anya na ị na-agụ ya. Ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-achọ ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla,
Junto condodo mencionado na mbu, ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ndị ọzọ na-eleta ya anya. Ọ bụrụ na ị na-elebara anya, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Tanto SEO dị ka azụmahịa ahịa na-arụ ọrụ na ngalaba, ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eme ka ndị mmadụ na-eme, SE SE na-eme ka ọ bụrụ na ị na-akwado spam. Dị ka ihe na-eme ka a na-agụnye ihe dị iche iche na nke centrarse en Source .